ခရိုင်ဆရာဝန်ကြီးလက်ချက် ကြက်ခြေနီ အသက်ထွက် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ခရိုင်ဆရာဝန်ကြီးလက်ချက် ကြက်ခြေနီ အသက်ထွက်
ခရိုင်ဆရာဝန်ကြီးလက်ချက် ကြက်ခြေနီ အသက်ထွက်
Posted by ghost on Oct 5, 2011 in Creative Writing | 21 comments
သံတွဲမြို့ ခရိုင်ဆေးရုံကြီးမှ ခရိုင်ဆရာဝန်ကြီးဒေါက်တာတင်ငွေ ၏ ဂုဏ်ထူး ဆောင်အချက်များ
(၁)ပြည်သူ့ဆေးရုံ ဆေးပဒေသာပင် အတိုးငွေ သိန်း(၂၀) အား ဘောက်ချာလိမ်(အတု)များဖြင့်အလွဲသုံးစားသမှုပြုခြင်း၊
(၂)ဆေးရုံအနီးတစ်ဝိုက် လမ်းဘေးဈေးသည်များထံမှ တစ်လလျှင် တစ်သောင်းနှုန်းကောက်ခံ၍ ကိုယ်ကျိုးသုံးခြင်း၊
(၃)ဆေးရုံမှ ခွဲစိတ်ဆရာဝန်နှင့်သားဖွားမီးယပ် အထူးကုဆရာဝန်များထံမှ လစဉ် တစ်သိန်းခွဲတိတိကို အတင်းအဓ္ဓမ တောင်း
ခံ၍ (မပေးလျှင်မနေရ) ကိုယ်ကျိုးရှာခြင်း၊
(၄)၎င်း၏နေအိမ်တွင် ကျန်းမားရေးဝန်ထမ်းမဟုတ်သည့် သမီးအား တရားမဝင် ဆေးထိုးခိုင်းခြင်း၊ ဆေးကုသခြင်းခွင့်ပြုပေးခြင်း၊
(၅)ဆေးရုံအတွင်း ၎င်း၏ရုံးခန်းအတွင်း မိန်းမငယ်လေးများဖြင့် အခန်းတံခါးပိတ်ကာ မဖွယ်မရာများကို နေ့စဉ်ပြုမူနေထိုင်ခြင်း၊
(၆)ရဲအောင်လံ ကားတိုက်မှုဖြစ်စဉ်တစ်ခုတွင် ရဲအောင်လံဂိတ်မှုးထံမှ လာဘ်ငွေ တစ်သိန်းလက်ခံပြီး ဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာရရှိသော
ကားတိုက်ခံရသည့် ဆိုင်ကယ်ပိုင်ရှင်အား သာမာန်ဒဏ်ရာဟု ထောက်ခံစာရေးပေးခြင်း၊
(ရ)အစဉ်အလာကောင်းခဲ့ပါသော ယခင်ကြက်ခြေနီအသင်း အား မိမိသဘောဖြင့် ဖျက်လိုဖျက်ဆီးလုပ်လျက်ရှိပြီး ကြက်ခြေနီအသင်း
ပျက်စီးလုလု ဆိုးဝါးသော အနေအထားသို့ရောက်ရှိနေခြင်း၊
…. ခရိုင်ဆရာဝန်ကြီးဒေါက်တာတင်ငွေမှာ မူလတာဝန်ကျခဲ့ပါသော ကန့်ပလူမြို့တွင် ဆိုးဝါးသော အလားတူပြဿနာများဖြင့်
ယခုတင်သော သတင်း၏ အမှားအမှန်ကို သေချာစုံစမ်း ကြည့်ပြီးမှသာလျှင် ဝေဖန်စာ ရေးကြပါရန် လေးစားစွာ
ဟဲ့ ပလုတ်တုတ် ..
မသေချာရင် မကြေငြာ နဲ့နော် ပြဿနာ များနိုင်တယ်
ဟုတ်ရင် ဖြေရှင်းဖို့သာ ပြင်ထားပါလေ ။
ကျိန္တလီသား says:
ကျနော်က ကြက်ခြေနီ အသင်းဝင်ပါ ဟိုးအရင်က ခရိုင်ဆရာဝန်ကြီး ဦးတင့်ရွှန်း နဲ့ကြက်ခြေနီ
တပ်ဖွဲ့ တပ်ရင်းမှုး မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှုး ဒု-ရဲမှုးဋ္ဌေးလွင် တို့နောက်ဆုံး ဆောင်ရွက်တာဝန်ယူကတည်း
က အသင်းမှာရှိနေခဲ့သူပါ အဲဒီပု​ဂ္ဂိုလ် ကြီး နှစ်ဦးစလုံးတွေဟာ သံတွဲမြို့သားဇာတိ မဟုတ်ပေမဲ့
လူမှုရေး စိတ်ဓါတ် ပြည့်ဝစွာနဲ့ ကိုယ်ကျိူးမဖက် ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသူတွေပါခင်ဗျာ
အခု ခရိုင်ဆရာဝန်ကြီးကတော့ အဲဒီ လူမှုရေးစီမံချက်ကို ဆက်လက်တာဝန်ပေးအပ် တဲ့အခါ လုံးဝ
ကျနော့်အထင် အနှစ်နှစ်အလလ စုဆောင်းလာခဲ့တဲ့ ကြက်ခြေနီ ရံပုံငွေကို မျက်စောင်းထိုးနေတာ
လဲ သေချာနေပါတယ် သူဟာ ငွေကိုလဲ အလွန်မက် ငွေတစ်မျက်နှာကိုပဲ ကြည့်တတ်သူ အဖြစ်
နာမည်ကြီး သူတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အပြင် တဏှာရမက် ကြီးသူ အဖြစ်လဲ နာမည်ကြီးနေသူဖြစ်
ရဲအောင်လံကား တိုက်တဲ့အမှုမှာလဲ ရဲအောင်လံဂိတ်မှုးမှ လာဘ်ငွေပေး လို့ မလျော်သက်သေ
ထွက်ဆိုပေးတဲ့ကိစ္စအရပ်ရပ် အတွက်လဲ ကျိန္တလီကျေးရွာမှ ရပ်မိရပ်ဖ ကိုးဦး ခန့် လက်မှတ်ထိုး
ပြီး ဆိုင်ရာ သို့ တနေ့က တိုင်ကြားထားပီး ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
ရှုပ်ထွေးကျယ်ပြန့် လှတဲ့ လောဘ ဒေါသ မောဟ ပြင်းထန်လွန်းတဲ့ လောကီ ဘုံဘဝ မို့
ချို ချဉ် ဖန် ခါး စုံတော့မပေါ့ ၊ အမှန်ဖြစ်ခဲ့ရင် လက်ကမ်းကြိုဆိုသင့်တယ် လို့တော့ထင်တာပဲ၊
နံပါတ် ၅,၆,၇ အချက်တွေက လေသံပစ်ယုံတမ်းစကားတွေကို အကြားသက်သက်ရေးထားတာလို့ ယူဆလို့ ရတယ်။မဟုတ်မမှန်တာ ကို
ရေးမယ် ဆိုရင်လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတစ်ယောက်အပေါ် စော်ကားရာကျပါတယ်။ကိုယ့်မြို့ ရဲ့ ဧည့်သည်ဆရာဝန်ကြီးတစ်ယောက် အပေါ်အကြီးအကျယ်ဧည့်မကျေရာကျတာအမှန်ပါ။လူမှုရေး လုပ်ငန်းတွေမှာ အားတက်သရောပါဝင် လှုပ်ရှားနေတာ အားလုံးမြို့ မိမြို့ ဖတွေအသိပါ။ကြက်ခြေနီရဲ့ အဖွဲ့ ရံပုံငွေတွေကို အလွဲသုန်းစားလုပ်ရအောင် မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။
နံပါတ် (၆) အချက်မှာ လာဘ်ငွေ ယူမယူတော့မသိဘူး ။ ဒဏ်ရာအပြင်းအထန်ရတဲ့လူနာကို သာမာန်ဒဏ်ရာလို့ ဆေးစာရေးတယ်ဆိုတာတော့သိလိုက်ပါတယ် ။ ကားတိုက်ခံရတဲ့သူနဲ့ကိုတွေ့တာပါ ။ အခင်းဖြစ်စဉ်ကလဲ ဆေးရုံးမှာသတင်းသွားမေးဖြစ်ပါတယ် ။ ဆိုင်ကယ်ပျက်စီးတာကိုလဲ ဓါတ်ပုံပြလို့မြင်ခဲ့ရပါတယ် ။ အဲဒီအမှုခုထိမပြီးသေးတာတော့သေချာပါတယ် ။ ကားတိုက်ခံရတဲ့သူက မကျေနပ်လို့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ကိုလည်းတိုင်ထားတယ်ပြောပါတယ် ။
ရိုး ရွာဆော်တွေကတော့ ရွာဆော်နေပြန်ပီ။ခရိုင်ဆရာဝန်ကြီးက ကိုယ့်မြို့ ကဧည့်သည်မို့ ကာကွယ်ပေးရမယ့်အစား ချောက်ချနေပြန်ပီ။
လူ့ ငနာတွေကြောင့် ငရို့ ရွာနေတယ်ဝေး။
ဘောလုံးပွဲလေး ကောင်းရင် နည်းနည်းပါးပါးဆော့တတ်တယ်။နည်းနည်းပါပါးပါဗျ။ကြိုက်ရင် သိန်းဂဏန်းပေါ့။မကြိုက်တော့လဲ သောင်းဂဏန်းပါဘဲ။
အဖေနဲ့ သားအပြိုင်အဆိုင် ဆော့နေကြတာ ဒိုင်ချုပ်တွေပို သိမှာလေ။ငွေတော့ တော်တော်ထွက်တယ်ဆိုဘဲ။ငွေတွင်းကြီး ပိုက်ထားတယ်တွေးမိတယ်။
နှာကိစ္စကတော့ မပြောပါနဲ့ ။ယောကျာ်းမို့ ခွင့်လွှတ်လိုက်. ခွင့်လွှတ်လိုက်။
ဖေါက်သယ်ချပေးရဦးမယ်။ဆရာဝန်ကြီးလက်ချက်တော့ မဟုတ် လက်မှတ်မပါလို့ဆေးကုဖို့ ရန်ကုန်သွားလို့ မရဘူးဖြစ်နေတယ်။သံတွဲဂျီတီအိုင်က ကျောင်းသားလေးနှစ်ယောက် ဆိုင်ကယ်အက်စီးဒင့်ဖြစ်တော့ တစ်ယောက်က မပြင်းထန်ပေမယ့်။စီးနင်းသူ မောင် ——–မှာ ဦးခေါင်းတွင်းသွေးယို၊ပေါင်တချောင်းအဖီပြုတ်၊ကျန်တချောင်းကျိုး။လက်ကျိုးဖြစ်နေလို့ ဆေးကုဖို့ ရာ သံတွဲဆေးရုံက မနိုင်လို့ ရန်ကုန်သို့ လွှဲပြောင်းဖို့ ရာ လေယဉ်ရုံးမှလဲ လက်မခံ၊သူကလဲ လက်မှတ်ထိုးမပေးတော့ ကျောင်းသားတွေကြားမှာရုတ်ရုတ်သဲသဲဖြစ်နေတယ်။ဆက်လက်မလိုက်လျောပါဘဲ အသေခံရမယ်ဆိုရင်တော့ ဆရာဝန်ကြီးအပါအဝင် မြန်မာ့လေကြောင်းပါ. ဂျီတိအိုင်ကျောင်းသားများအကြား
ထိန်းမနိုင်သိမ်းမရဖြစ်တော့ မှာ တာစူနေပီဖြစ်သည်ကို ဦးဦးဖျားဖျားပေးသိလိုက်ပါသည်။
yel ag lun says:
အေးလေဗျာ ဒီသူတွေကလဲ မဟုတ်တာကို လာကပ်နေကြတယ်
ဒဏ်ရာ ရ ကျာင်းသားလေးတွေ အချိန်ကြန့်ကြာလာရင် ဒုက္ခရောက်ကြရတော့မှာ
ကြားရတာ အမှန်တစ်ကယ် စိတ်မကောင်းပါဘူး၊
ဒီနေ့ လေယဉ်နဲ့ သွားခွင့်ရသွားပါပီ။မသေရုံတမယ်ပါဘဲ၊ခံစားနေရတဲ့ဝေဒနာသည်ကို စာနာသင့်ပါရဲ့ လေ။ခုတလော. ကမ်းနားမှာရော၊မြို့ ထဲမှာပါ. တိုက်ကြတဲ့ ကားတွေ၊ဆိုင်ကယ်တွေ များနေပါတယ်။ယဉ်အန္တရာယ် ဖြစ်ပီးရင်လဲ ပြေးကြတယ်။ဥပဒေမဲ့ အကျင့်တွေ ပျက်လာကြပါတယ်။စိတ်မကောင်းဖြစိမိပါတယ်။
ကျိန္တလီသားတဲ့လား…….လာပြန်ပြီ၊နောက်တစ်မျိုးနဲ့……ကိုယ်သိသလောက်တော့ဝင်ပြောပြမယ်။ ခရိုင် ဆရာဝန်ကြီးအတိုးငွေသိန်း(၂၀)ဆိုတာလွယ်တဲ့ငွေတော့မဟုတ်ဘူးကိုယ့်လူ၊ဒီလောက်ငွေ အများကြီးကို လိမ်ပြီးထုတ်ယူထားတာတိကျတယ်ဆိုရင်သူ့.အောက်က၀န်ထမ်းတွေရော ၊ဆေးရုံကြီးကြပ်အဖွဲ့.တွေရော ဘယ်သူမှကြည့်နေမှာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်လူ။(၅)ဆေးရုံအတွင်း ၎င်း၏ရုံးခန်းအတွင်း မိန်းမငယ်လေးများဖြင့် အခန်းတံခါးပိတ်ကာ မဖွယ်မရာများကို နေ့စဉ်ပြုမူနေထိုင်ခြင်း… ခရိုင်ဆရာဝန်ကြီးတစ်ယောက် အနေနဲ့ .ဒီလိုအပြုအမူမျိုးပြု လုပ် လိမ့် မယ်လို.တော့မထင်ဘူး။ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားကဘယ်နေ.ဘယ်ရက်ကတော့ဘယ်အမျိုးသမီးနဲ့.ဘယ် အချိန် မှာအတိအကျပြောနိုင်ရင်ကျုပ်တို့.သံတွဲသားတွေကိုယ်တိုင်လက်မှတ်စုထိုးပြီးမြို.ကနေနှင်ထုတ်ပြစ်မယ်။ ၆)ရဲအောင်လံ ကားတိုက်မှုဖြစ်စဉ်တစ်ခုတွင် ရဲအောင်လံဂိတ်မှုးထံမှ လာဘ်ငွေ တစ်သိန်းလက်ခံပြီး ဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာရရှိသော
ကားတိုက်ခံရသည့် ဆိုင်ကယ်ပိုင်ရှင်အား သာမာန်ဒဏ်ရာဟု ထောက်ခံစာရေးပေးခြင်း ..ဆိုတဲ့အချက်ကိုစုံစမ်းကြည့်တော့ရဲအောင်လံကားဟာဒီ2011ခုနှစ်ထဲမှာ ယာဉ်တိုက်မှုလုံးဝမရှိကြောင်း စုံစမ်းသိရှိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့စုံစမ်းသိရှိရတာကဦးကျော်ကျော်ပိုင်တဲ့ ကုန်ကားတစ်စီးကိုမော်တော်ဆိုင်ကယ်တစ်စီးကသူ.ဆိုင်ကယ်နဲ့အဲဒီကားငြှိပါတယ်ဆိုပြီး ရဲစခန်းကို(၉)ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ က အတွင်းရေးမှုး ဦးအောင်သူကပါဝါသုံးပြီးအတင်းအမှုဖွင့်ခိုင်းတယ်တဲ့ဗျာ။ အဲဒီတော့ယာဉ်ပိုင်ရှင်ဦးကျော်ကျော် ကမဟုတ်ဘဲနဲ.သူ.ကားသမာတွေကိုစွပ်စွဲတယ်ဆိုပြီးမှားယွင်စွာတစ်ဖက်သတ်အမှုဖွင့်ပေးတဲ့ရဲတွေ ကြို ပည် နယ်ရဲမင်ကြီးဆီကိုတိုင်တယ်တဲံ့ဗျာ။အဲဒီမှာပြည်နယ်ကလာပြီးဆင်းစစ်ဆေးတဲ့ အခါရဲတပ်ဖွဲံ့.မှာအပြစ်ရှိတဲ့ ဒုရဲအုပ်ဟာရာထူးချပြီးအရေးယူခံရသတဲ့ဗျာ။ ကျွန်တော်ရေးတဲ့အထဲမှာမုသားလုံးဝမပါပါဘူး။ အမှန်အတိုင်း စုံစမ်ပြီးအဖြစ်မှန်တွေကိုအားလုံးသူသိအောင်ပြောပြတာပါ ။ပြည်ခိုင်ဖြိုးနဲ့.ပတ်သက်တယ်ဆိုတော့ဒီပိုစ့်ဘယ်သူတင်တယ်ဆိုတာအားလုံးသူသိမှာပါ ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။။။။။
အခုဒီပိုစ့်ကိုဖတ်မိရင်တောင် အဲဒီဆရာဝန်ပြေးတော့မယ်ထင်တယ်။ သူ့အကြောင်းတွေလူတွေသိကုန်ပြီဆိုပြီး…။
ဘာဘဲပြောပြော သန်တွဲသား ပြောတာကိုလက္ခံတယ်
လက္ခံတယ်ဆိုတာ ထောက်ခံတာကို ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူး
ပြောတဲ့လူက ဖော်ပြခဲ့သလို ပြောတာဟာ အကြောင်းရာတစ်ခုကို တိုင်ကြားတဲ့သဘောရှိတယ်
ဒီလိုတိုင်ကြားတာကို သံတွဲသားက ပြန်လည်ဖြေရှင်းတယ်လို့ယူဆတယ်
တိုင်ကြားတဲ့သူက မိမိရဲ့တိုင်ကြားမှု့ကို တစ်ဖက်က တုံ့ပြန်တဲ့အခါ ပြန်လည်မရှင်းပြနိုင်မှရမယ်
မဟုတ်လို့ကတော့ မိမိရဲ့ တိုင်ကြားမှု့ဟာ အနည်းဆုံးအထင်လွဲမှု့
ဘယ်သူဝါးလဲ ဘယ်သူယောင်လဲဆိုတာ ပြောဘို့ခက်ပေမယ့်
ခင်ဗျားတို့ ပစွမ် ( ပုဇွန် ) တွေက မစွမ် ( မစွံ ) ပါဘူး အခွမ် ( အခွံ ) တွေချည်းဘဲဆိုသလိုဖြစ်နေပြီ
မိုက်လို့ စိုက်တွေ ( စစ်တွေ ) က လာကြသလား
ထောင်ကျရင် တစ်နှိုက်နှစ်နှိုက် ( တစ်နှစ် နှစ်နှစ် ) ဘဲ
မောင်မိုးဒီ တခါမှမမြင်ဖူးလောက်အောင်ရိုင်းပြနေပါလား။ရေးထားသူနဲ့ ပြန်လည်ဖြေရှင်းသူနဲ့ ဟုတ်နေတာ ပါလား။အဆဲအဆိုတွေပါလာပီ။ရင်းရင်းနှီးနှီးဆွေးနွေးဖို့ တက်စား ရန်ဖြစ်ဖို့ ရှာနေသလိုပါလား။
)))(၃)ဆေးရုံမှ ခွဲစိတ်ဆရာဝန်နှင့်သားဖွားမီးယပ် အထူးကုဆရာဝန်များထံမှ လစဉ် တစ်သိန်းခွဲတိတိကို အတင်းအဓ္ဓမ တောင်း
(၄)၎င်း၏နေအိမ်တွင် ကျန်းမားရေးဝန်ထမ်းမဟုတ်သည့် သမီးအား တရားမဝင် ဆေးထိုးခိုင်းခြင်း၊ ဆေးကုသခြင်းခွင့်ပြုပေးခြင်း၊)))))ဆိုတော့ အကယ်၍ အဖြစ်မှန်ဆိုရင်တော့ ဆေးကောင်စီကို တိုင်ပေါ့ဗျာ။မဟုတ်မမှန်သက်သေအလီဘိုင် မပြနိုင်ရင် အသရေဖျက်သလိုဖြစ်နေမှာ မကြောက်ဖူးလား။
အသရေဖျက်တာတော့မဟုတ်ရပါဘူးခင်ဗျာ ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပီး အားလုံးတိုင်စာတင်ထားပါတယ်
အာရက္ခမြေသား နဲ့ သံတွဲသား ဖြေရှင်းတာတွေ က လုံးဝ လွဲမှား နေပါတယ် သံတွဲမြို့မှာနေတဲ့သံတွဲသားတွေဖြစ်ပီး ဘာကြောင့် စာဖတ်သူစိတ်တွေ ဝေဝါးအောင် လုပ်နေပါသလဲ
ဆိုတာ စဉ်းစားလို့ မရနိုင်အောင်ပါပဲခင်ဗျာ ဒီသတင်းလဲ အင်တာနက်မှာတက်သွားပီ
တိုင်စာလဲတက်သွားပီ ဆိုတော့ မှန်ကန်အောင်စစ်ဆေးပေးဖို့ ပဲစောင့်မျှော်ရပါတော့မယ်
မိုးလုံးပြည့်လိမ်ညာ နေတဲ့ အကောင့်ပိုင်ရှင်တွေနဲ့ ဆက်လက် မငြင်းခုံ လိုတော့ပါဘူး
ဘယ်သူ့အတွက်မှလဲ အကျိုးမရှိလို့ပါ . အကျိုးမဲ့ခြင်း အချိန်ကုန်ခြင်း အင်တာနက်ခ ကျသင့်ငွေ
ပိုခြင်းတွေနဲ့ အလဟသ ဖြစ်ခြင်းတို့ပဲ ရှိမှာမို့ပါခင်ဗျာ
ဝင်ရောက်ဆွေးနွေး တဲ့ မိတ်ဆွေများကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ ။
ဟုတ်မှာပါ ကိုကျိန္တလီသားရယ်ဗျာ နော်။အကုန်အကျလဲ များနေပါအုံးမယ်လေ။တကယ်တိကျလို့ တိုင်စာအရ အရေးယူစစ်ဆေးမေးမြန်းမယ်ဆိုရင် ကောင်းသားပါဘဲ။ခရိုင်ဆရာဝန်ကြီးတစ်ယောက်က ခုလိုမျိုး ငွေကိစ္စအရှုပ်အရှင်းရှိနိုင်ပေမယ့် ပြည်သူ့ ဆေးရုံမှာတော့ဖြင့် မိန်းကလေးတွေနဲ့ မဖွယ်မရာ ငရို့ မကြားရပါလား။ဖြစ်လဲမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဆရာဝန်ကြီး သမီးမို့ သူ့ အိမ်မှာ ဆေးပေး၊ဆေးထိုးလုပ်တာ ဆရာကြီးရှေ့ မှာလုပ်တာမို့ ဆရာကသူ့ တာဝန်သူယူလို့ နေမှာပါ။ငရို့ ဆီမှာ အပ်ပုန်းတွေနဲ့ ကုနေတာထက်တော့ သာသေးတာ မဟုတ်လား။ဘယ်လို ကြောင့်. ဧည့်သည်တစ်ယောက်အပေါ် မကောင်းနိုင်ကြတာလဲဗျာ။ယူနိုင်လို့ ယူမယ်ဆိုလဲ ပေးလိုက်ပါ. မတားပါနဲ့ ။ရှေ့ အစဉ်အဆက် ပြောင်းရွှေ့ သွားတဲ့ အာဏာပိုင်တွေ ကားနဲ့ ပစ္စည်းတွေရွှေ့ ယူသွားခဲ့ကြသေးတာဘဲလေ။
ခေါင်းစဉ်နာမည် ပြောင်းသင့်တယ်။ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီဝင်လက်ချက် မဟုတ်ဘဲ ခံရခက်လို့ ။ထင်မြင်ချက်ပေးဖို့ ရာ မဆီလျော်၊မအပ်စပ်၊စွပ်စွဲ ဂျောက်ချရေးနေခြင်းသက်သက်ဟု ယူဆရပါကြောင်း။
တစ်ချို့ စာတွေပျောက်သွားတယ်ထင်ပါတယ်။အုပ်စုနှစ်ဖွဲ့ တိုက်ခိုက်နေတယ်ပြောရမယ်။တစ်ဖက်က အတင်းအဓမ္မ ချောက်ချတယ်၊တစ်ဖွဲ့ ကအကောင်းမြင်၊အချက်အလက်ကျကျဝေဖန်စီစစ်ရေးသမားတွေ။ဘယ်သူမှန်တယ် ပြောရမလဲ ဆိုတာ အချိန်ရယ်၊ပရိသတ်ရယ်က ဆုံးဖြတ်သွားပါတယ်။အတင်းအဖျင်းသမားတွေက ခြေရာဖျောက်၊နာမည်ပြောင်း မျက်လှည့်ပြ လှည့်ပတ်နေချိန်မှာ ဟိုတစ်ဖက်က အစဉ်တစိုက်အမှန်တွေပြောနေတာ အကန်ကိုဆက်တိုက်ခံနေရတော့တာပါလားဗျာ။
ဒီလို ပို့စ်မျိူးကို ပိတ်သင့်တယ်ထင်ပါတယ်။ မလိုရင်မလိုသလိုရေး ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် လူနာမည်တွေနဲ့ရေးနေကြတော့ ကာယကံရှင်ရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာ ထိခိုက် ပါတယ်။ ရေးတဲ့ သူက တော့အမြဲတမ်းသူတို့ပဲအမှန်ပုံစံနဲ့။ အစိုးရဝန်ထမ်းဆိုတာ မှန်တာ မမှန်တာနောက်ထား တိုင်စာတက်တာနဲ့ ထိခိုက်တာပါ။ တိုင်ခံရလို့ပြုတ်သွားပြီးမှ လုပ်ကြံပြီးတိုင်တာ ပေါ်သွားလည်း ဘာမှအဖတ်ပြန်ဆယ်လို့ မရတော့ဘူး။ ဘက်လိုက်ပြောတာမဟုတ်ပါ။ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ မြင်နေရလို့ပြောတာပါ။ တကယ်သူတို့ လုပ်ရပ်မှားနေရင် သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာနကိုတိုင်လို့ရပါတယ်။ ဒီလို အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ငါ့ကိုဘယ်သူမှမသိဘူးဆိုပြီး သူတပါး ကိုအပုပ်ချနေမယ့်အစား ပေါ့၊ ဒီလို မန့်လိုက်လို့ ဒီဆရာဝန်ကြီးနဲ့တော့ မပေးစားလိုက်နဲ့ဦးနော်။ မန့်သာ မန့်လိုက်ရတယ်။ ခပ်ကြောက်ကြောက်ပဲ။ အရမ်းလွန်လွန်ကျွံကျွံ ရေးနေ မန့်နေကြတာတွေတွေ့နေရလို့။
ဖြစ်နိုင်ချေ ရှိတာလေးတွေကို ၀င်ရေးပေးကြတာ ကျေးဇူး တင်ပါတယ် တိုင်စာ တင်ပြီးတော့မှ ဒီ သတင်း
လေးကို ရေး တင်လိုက်မိတာပါ သတင်းရဲ့ဇတ်လိုက်ကျော်ကြီး ဆရာဝန်ကြီးက ကြွေးကျော် နေတာမို့
‘” တိုင်ချင်တဲ့ နေရာ တိုင်ကြ….. ငါ့ဝန်ကြီးက လုပ်စရာရှိတာဆက်လုပ်….ဂရုစိုက်မနေနဲ့ ..ငါရှိတယ် “”
ဒီစကားကိုသုံးပြီး ပြောနေတာမို့ အသဲယား မိပြီး ရေးလိုက်မိတာပါ
ကျနော် အပါအ၀င် ကြက်ခြေနီ အသင်းမှ တာဝန်ရှိသူတော်တော်များများ စိတ်ဆင်းရဲ ကိုယ်ဆင်းရဲ ဖြစ်နေ
ဒီသတင်းကိုရေးမိလို့ လွတ်လပ်စွာဝေဖန် ဆွေးနွေးခြင်းအပေါ်ကို ကြည်ဖြူစွာ လက်ခံကြိုဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ ။